भारतमा २४ घन्टामै थपिए २ हजार कोरोनाका नयाँ सं`क्र`मित थपिए, नेपालमा पनि ब`ढ्यो खत`रा ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /International News/भारतमा २४ घन्टामै थपिए २ हजार कोरोनाका नयाँ सं`क्र`मित थपिए, नेपालमा पनि ब`ढ्यो खत`रा !
भारतमा कोविड–१९’ संक्र`मितको सं`ख्या ३५ हजार ४३ पुगेको शुक्रबार जनाइएको छ । योसँगै भारतमा कोरोना संक्र`मणबाट ज्या`न जानेको सं`ख्या १ हजार १४७ पुगेको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रा`लयले जनाएको छ ।
गएको २४ घन्टायता भारतमा एक हजार ९९३ कोरोना भाइरसका नयाँ संक्र`मित थपिएका छन । उक्त मन्त्रालयका अनुसार भारतभर गएको २४ घन्टायता निध`न हुनेको सं`ख्या ७३ जना रहेको छ । भारतमा देखिएका यी संंक्र`मितहरूमध्ये ८ हजार ८८८ जना भने उपचारपछि निको भएर फर्किएका छन् ।
मन्त्रा`लयले दिएको जानकारी अनुसार हाल यहाँ २५ हजार ७ कोरोनाका संक्र`मित विरामी अस्पतालमा उपचाररत रहेका छन् । महा-राष्ट्रपछि गुजरात यस भाइरसको संक्र`मण दोस्रो स्थानमा रहेको र यहाँ ४ हजार ३९५ रहेका छन् । यस राज्यमा ६१३ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् । गुजरातमा यस भाइरसको सक्र`मणको कारण २१४ जनाको ज्या`न गएको छ ।
गुजरातपछि यस भाइरसको संक्र`मण तेस्रो स्थानमा दिल्ली रहेको र यहाँ ३ हजार ५१५ संक्र`मित रहेका छन् । यस राज्यमा १ हजार ९४ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् । दिल्लीमा यस भाइरसको सक्रमणको कारण ५९ जनाको ज्यान गएको छ । भारतमा कोरोनाको खतरा बढेसंग नेपालमा पनि अहिले कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएको छ ।
नेपालमा थप २ जनामा कोरोना भाइरसको संक्र`मण देखिएको छ। नेपालगञ्ज र रुपन्देहीमा १/१ जनामा कोरोना देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रा`लयले जनाएको छ। मन्त्रा`लयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधि`कारीका अनुसार रुपन्देही निवासी २५ वर्षका पुरुष र नेपाल`गञ्जका ६० वर्षीय पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्र`मण देखिएको हो। उनीहरु स्वास्थ्य`कर्मीको निगरानीमा छन्। नयाँ भेटिएका दुबै संक्र`मित पुरूष हुन्।